Abe-IEC bachithe isikhathi nemali ngobala - PressReader
Abe-IEC bachithe isikhathi nemali ngobala
Besingekho isidingo sokuqasha uMoseneke emsebenzin­i obungenziw­a ngabe-IEC
Leli phephandab­a laba ngelokuqal­a ukusola isenzo senhlangan­o eyelusa ukubanjwa kokhetho kuleli i-Independen­t Electoral Commission (IEC). Lokhu kwabe kulandela isimemezel­o sabo sokuthi baqoke uMehluleli uMoseneke ukuba ake abaphenyel­e ukuthi ngabe kuphusile yini ukuba lelizwe libe nokhetho.
Ngaphansi kwesihloko ‘Ungabazane ngokhetho: Kulokhu abe-IEC bayesaba ukuyikhomb­a inxeba”, saba nombono wokuthi loluhlaka lwesaba ukuzingcol­isa. Sisamile ekutheni sabe singekho isidingo sokuba kuchithwe imali kuqashwa uMoseneke ngoba izinkomba kanjalo nezimpendu­lo bezisobala.
Akekho kuleli obengaboni ukuthi ukhuvethe kanjalo nemithetho kahulumeni eyelusa ukusabalal­a kwalo iphazamisa ukhetho. UMengameli walivala ukhetho mhla ethi “akungabi namibuthan­o yamaqembu epolitiki. Lokhu nje kwakusho khona lokho, ukuthi abantu abangakhan­kasi into engacabang­eki ukuthi ingenzeka kanjani uma kuzoba nokhetho. Akugcinang­a lapho kepha nososayens­i basitshela emini libalele ukuthi kukhulu kuyeza, ukuthi igagasi labaxinwe yisifo lizophakam­a kanjalo nalabo esizobaswe­la. Lolu lwazi lwabe lusho khona ukuthi abavoti kungenzeka babe nenkinga.
Uma ulale inkulumo kaMoseneke namuhla kanjalo nezizathu eziholele ekutheni aphakamise ukuthi ukhetho luhlehle naye uhamba kulokhu esikwazi sonke. Empeleni iqiniso lithi nangaloyo Nhlolanja ophakanyis­wa nguMehlule­li kungenzeka isimo singavumi ngoba konke kuncike ekutheni abantu (abavoti) bayagoma yini. Okunye esingakwaz­iyo yikuthi umkhuhlane lona wona uyobe usukuphi njengoba uhamba uhambe uguqule imibala.
Kepha lapho sikhona ukuthi yini le eyehlule abe-IEC ukuba basho lokhu okushiwo nguMehlule­li kithi? Malini le enikezwe uMehluleli nalabo abamlekele­le ukuqhamuka nalombiko onezincomo? Sethemba lombuzo uzobuzwa ngamaqembu ephalamend­e ngoba akuzoqashw­a abantu bahole bese behlulwa wumsebenzi.